Shina 100% Carbon fibre telescopic poloney poloney multifunction mpanamboatra sy mpamatsy | Lanbao
Poles Fiberglass Fiberglass ho an'ny rano ...
50FT teleskopika Long Reach Telescopic Water Rescue P ...
25Ft paingotra famonjena teleskopika miaraka amin'ny fanidiana Telescopic ...
Fantsona fibre karbaona samihafa ambonin'ny tany, 3K, 6K, 12K, a ...
Fantsona fibre karbona misy halava samy hafa, mety ho ...
Paingotra multifunction poloney telescopic fibre 100%
Ity tsorakazo teleskopika ity dia vita amin'ny fibre karbaona 100% ho an'ny fahamendrehana avo, lanja maivana, akanjo ary fanoherana ny harafesina. Ny tsorakazo teleskopika dia misy fizarana telo, ary ny famolavolana malefaka ny hidiny dia mamela ny mpampiasa hanitsy malalaka ny halavany.
Ireo tsato-kazo azo zahana fibre karbaona mora azo mihetsiketsika ary azo mihidy amin'ny halavany hatramin'ny 110cm ka hatramin'ny 300cm, izay mety indrindra amin'ny rindranasa rehetra ilaina ny fitehirizana sy ny halavan'ny fanitarana lava. Mora ampiasaina sy entina ireo bao ireo. Izy ireo dia afaka hitarina hatramin'ny farany ambony indrindra ao anatin'ny segondra amin'ny alàlan'ny famoahana sy fanidiana ny faritra telesopolo tsirairay.
Ity tsorakazo teleskopika ity dia azo ampiasaina ao an-trano hanadio an'i Windows sy hanadio ny tontolon'ny masoandro. Ny tsorakazo azo averina dia manome fahafaha-manadio avy lavitra. Ny famolavolana ergonomika dia mahatonga ny fanadiovan-davitra lavitra mba hitehirizana asa sy azo antoka kokoa.
Manana ekipa injeniera manana traikefa 15 taona amin'ny indostrian'ny fibre karbaona isika. Amin'ny maha orinasa 12 taona anay dia miantoka ny fizahana kalitao anatiny henjana izahay, ary raha ilaina dia afaka manome fizahana kalitaon'ny antoko fahatelo izahay. Ny fizotrantsika rehetra dia tanterahina mifanaraka amin'ny ISO 9001. Ny ekipanay dia mirehareha amin'ny serivisinay manao ny marina sy etika ary manome ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra hatrany.
Anarana Paingotra multifunction poloney telescopic fibre 100%
Fitaovana ara-materialy 1. Vita amin'ny fibre karbaona 100% modulus avo izay nafarana avy any Japon miaraka amin'ny reso epoxy
2. Fanoloana lehibe ny fantsom-boribory elatra ambany
3. Ny lanjan'ny vy 1/5 fotsiny ary 5 heny mahery noho ny vy
4. Fiakarana ambany amin'ny fanitarana hafanana, fanoherana ny hafanana avo
5. Faharetana tsara, fahasarotana tsara, fahaiza-miasa ambany amin'ny fanitarana hafanana
famaritana lamina Twill, lemaka
Surface Mamirapiratra, Matte
-dalana, 3K Na 1K, 1.5K, 6K
Loko Black, Gold, Silver, Red, Bue, Gree (Na miaraka amin'ny landy)
ara-nofo Japon Toray Carbon Fiber Fabric + Resin
Votoatin'ny karbaona 100%
Size Karazana ID Ny hatevin'ny rindrina halavan'ny
Pole teleskopika 6-60 mm 0,5,05,1 / 1,5,2,3,4 mm 10Ft-72ft
Fampiharana 1. Aerospace, Helicopters Model Drone, UAV, FPV, RC Model Parts
2. Fitaovana fanadiovana, fanadiovana ao an-trano, Outrigger, Pôtô fakan-tsary, mpaka haka
6. Ny hafa
Fonosana 3 sosona fonosana miaro: sarimihetsika plastika, fonosana bubble, baoritra
(Habe mahazatra: 0,1 * 0,1 * metatra (sakany * haavony * halavany)
Miaraka amin'ny kodiarana fanidiana mahazatra sy kofehy manerantany, ireo bao ireo dia miasa miaraka amin'ireo kofehy Unger rehetra sy ireo kofehy misy kofehy manerantany. Rehefa mampifandray squeegee, scrubber, borosy na vovoka amin'ny iray amin'ireo teleskopisinay ianao dia azonao atao ny manadio ireo faritra sarotra aleha haingana kokoa ary azo antoka kokoa noho ny fanadiovana amin'ny fitaovana sy tohatra. Isaky ny misy filana fanampiana lavitra, na ao anatiny na any ivelany.
Teo aloha: Pao teleskopika fitaovana 45Ft Hybrid
Manaraka: Fantsona fibre karbona misy halava samy hafa, azo ovaina namboarina
Poll Telescopic Piberglass
Pole Telescopic Piber Fibre
Poll fanadiovana varavarankely teleskopika